मैले चाहेको भए अमेरिका मै बस्न सक्थें तर म नेपाल आमाको रिण तिर्न गाउँ फर्किदै छु" -कुलचन्द्र गौतम, पूर्व सहायक महासचिब, संयुक्त राष्ट्र संघ | usa मैले चाहेको भए अमेरिका मै बस्न सक्थें तर म नेपाल आमाको रिण तिर्न गाउँ फर्किदै छु" -कुलचन्द्र गौतम, पूर्व सहायक महासचिब, संयुक्त राष्ट्र संघ | usa
We have 1131 guests and 340 members online
Content View Hits : 35773014
"मैले चाहेको भए अमेरिका मै बस्न सक्थें तर म नेपाल आमाको रिण तिर्न गाउँ फर्किदै छु" -कुलचन्द्र गौतम, पूर्व सहायक महासचिब, संयुक्त राष्ट्र संघ
Saturday, 26 January 2008 15:47
Exclusive interview: न्यू योर्क- उनी बिदेशमा सबैभन्दा उच्च अन्तर सरकारी ओहोदामा पुग्ने नेपाली छोरो हुन्‌। गुल्मी जिल्लाको क्षेत्र नं. १ मा पर्ने अमरपुर गाउँमा आज भन्दा ६९ बर्ष अघी अर्थात्‌ सन्‌ १९४९ मा जन्मिएका, सानो कद्का तर ठूलो बिचार भएका र व्यबहारमा उतार्नसमेत सफल असल नेपालीहरु मध्येका एक गर्बिलो ब्यक्तित्व हुन्‌- कुलचन्द्र गौतम।
संयुक्त राष्ट्र संघको सहायक महसचिब पद र संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोश-युनिशेफ (UNICEF) को उप निर्देशक पदसम्म पुगेर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ठूलो योग्दान पुर्याइ आफ्नो ३५ बर्ष लामो सेवाबधी पुरा गरी उनी हालसालै (डिसेम्बरमा) अबकाश भएका हुन्‌ ।
यो साता युएस नेपाल अनलाइन डट कमले उनको न्यूयोर्क शहरको निवासस्थानमा गएर भेट गर्‍यो ‌। त्यतिखेर उनका आँखा भरी नेपालप्रतिको माया र उनका बिचारमा नयाँ नेपाल निर्माणको रुपरेखा झल्किएको देखिन्थ्यो। यसपाली हामीले उनीसँगको झन्डै सवा घण्टा लामो कुराकानीको मुख्य भाग प्रस्तुत गरेकाछौं, पढ्नुहोस्:
Kulchandra Gautam and USNepalOnline.com Editor-in-Chief, Pradeep Thapa Magar. Photo: Ang Kami Sherpa (PhotoHera.com)
युएस नेपाल अनलाइन: ३५ बर्षको लामो सेवाबाट अबकास लिनु भएपछि अहिले कस्तो अनुभब गर्नु भएको छ?
गौतम: यतिका बर्षसम्म दिन रात काम गरेर अहिले एक महिना भयो काम गर्न छोडेको। अहिले मेरो जिउ हलुङ्‍गो भएको छ। आनन्द लागेको छ। अब म मेरो जिबनको नयाँ अध्याय शुरु गर्न नेपाल जाँदै छु। र, म यस कुराले निक्कै उत्साहित र प्रेरित भएको छु।
युएस नेपाल अनलाइन: यो अबकास स्‍वेच्‍छा कि सेवाबधी पुरा भएर लिनु भएको हो?
गौतम: दुइटै तवरले हो। हुन त मैले चाहेको भए अरु केही बर्ष काम गर्न सक्थें। युएनमा यो तहमा उमेरको हद बन्दी हुँदैन। तर मैले यसो बिचार गर्दा त नेपाल छाडेको ४० बर्ष भएछ। तेसैले मेरो उमेर, स्वास्थ्य राम्रो हुँदै देशमा फर्केर देशको निम्ती पनि त केही गरौं भन्ने उत्साहले अहिले सेवा छोड्नु ठीक समय लागेर यो निर्णयमा पुगेको हुँ।
युएस नेपाल अनलाइन: कसरी शुरु गर्नु भएको थियो युएन-युनिशेफको सेवा, बताइ दिनु हुन्छ कि?
गौतम: त्यो त धेरै लामो कहानी छ, तर छोटकरीमा भन्दा सन्‌ १९७३ को जूनमा मैले शुरु गरेको थिएँ। र, मलाई क्याम्बोडियामा गएर काम गर्ने अबसर दिइयो। उतिखेर म अमेरिकामा पढ्न आएको थिएँ-१९६८-७१ सम्म। अमेरिकामा भियतानामको लडाईंको बिरुद्धमा ठुलठुलो आन्दोलन भई रहेको थियो। तेसमा म सकृय थिएँ। तेतिखेर मलाई के लागेको थियो भने यती सानो मुलुक भियतनामले कसरी शक्तिशाली अमेरिकालाई परास्त गर्न सक्यो। तेसै समयमा सन्‌ १९७३ मा पेरिस सम्झौता भयो र भियतनाममा शान्ती आउने कुरा भयो। यता युएनले उद्धार र पुनर्सम्रचना (Relief and Reconstruction) गर्ने कार्यक्रम बनायो। मैले भियतानाम जाने सोचले युनिशेफमा निबेदन दिएको थिएँ तर अन्तर्वातामा चुनिए पछि मलाई भियतनामको सट्‍टा क्याम्बोडिया पठाइयो।
युएस नेपाल अनलाइन: कस्तो (बिडम्बना!) संयोग, ३५ बर्ष अघी तपाईं उद्धार र पुनर्सम्रचनाकोलागि सेवा शुरु गर्नु भयो अहिले ३५ बर्ष पछि तपाईं नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ शान्ती र पुनर्सम्रचनाको कुरा हुँदै छ...
गौतम: यो एउटा संयोग नै हो। यो ३५ बर्षमा मैले धेरै युद्ध पीडित देशहरुमा काम गर्ने मौका पाएँ र त्योबाट धेरै शिक्षा लिन सकिन्छ। कति देशमा लडाईं पछि शान्ती आउँछ तर शान्ती पछि पुनर्निर्माण र प्रजातन्त्र बिकास गर्ने कुरामा गल्ती हुन जान्छन्‌ अनि शान्ती छाएको ४, ५ बर्ष पछि फेरी लडाईं शुरु हुन्छ। यसो भएको बिगतबाट हामीले शिक्षा लिन नसिकेको हुनाले हो।
अब नेपालमा यस्तो शिक्षा अयन्त जरुरी छ। हामी कहाँ पनि शान्ती आउँदै छ, संबिधान सभाको चुनाव हुँदैछ। यो एक दमै राम्रो कुरो हो। तर हामी यही राजनीतिक कुरामा मात्र लागेर सर्ब साधारण जनताको जिबनस्तर उकास्ने, उनिहरुको रोजी रोटी, रोजगारीका कार्यक्रममा शुरुदेखी नै ध्यान नदिने हो भने फेरी लडाईं शुरु हुन सक्छ। तेसैले अरु देशको गल्ती र राम्रा कुराहरुबाट शिक्षा लिएर नेपालको बिकास र पुनर्निर्माणमा हामी लाग्नु पर्छ। मैले आफुलाई यसै क्षेत्रमा लगाउने बिचार गरेको छु।
Kulchandra Gautam with Pradeep Thapa Magar & Shambhu Moktan of MoktanDigital.com. Photo: Ang Kami Sherpa (PhotoHera.com)
युएस नेपाल अनलाइन: तपाईं युएन्-युनिशेफमा सेवारत रहँदा उल्लेख्य काम के के भए त?
गौतम: सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाँही सन्‌ १९९० मा जतिखेर म युनिशेफको कार्यकम निती निर्देशक थिएँ, विश्वमा पहिलो पटक बालबालिकाकालागि विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit for Children) न्यू योर्कमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा संसार भरका राष्ट्रपति, राजा, प्रधानमन्त्री जस्ता राजनेताहरु भेला भएका थिए। त्यो सम्मेलनको बाल घोषणा पत्र निर्माण गर्न मलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यो घोषणा पत्र विश्व भरका राजनेताहरुबाट पारित हुनुलाई म ऐतिहासिक ठान्दछु।
Kulchandra Gautam with Ban Ki Moon, General Secretary, UN. Photo courtesy: UN.org
युएस नेपाल अनलाइन: युएन (United Nations) को सहश्राब्दी बिकास बर्षको लक्ष (Millenium Development Goals) पुरा होलान्‌ कि नहोलान्‌?
गौतम: मेरो बिचारमा अली अली गर्दै प्रगतीहरु हुँदै छ। कुनै देशमा राम्रो हुँदै छ भने कुनै देशमा राम्रो भएर पनि लडाईंको कारण, एड्‍सको कारणले नकारात्मक परिणाम आइ रहेका छन्‌। मैले सेवा शुरु गर्दा पाँच बर्ष मुनिका एक करोड साठी लाख बच्चा बर्सेनी मर्दथे भने आज ९७ लाख मात्र मर्ने स्थितिमा झरेको छ। १९९० देखी १९५० को यो सहश्राब्दी बिकास बर्षको लक्षअनुसार बाल मृत्‍यु दर दुई तिहाइले घटाऊने र आमाको मृत्‍यु दर तीन चौथाइले घटाऊने भन्ने छ। तेसै गरी गरीबिको उन्मुलन आधा घटाऊने भन्ने छ। कतिपय लक्ष पुरा नहुने पनि सम्भाबना किन छ भने उदाहरणकोलागि अफ्रिकामा बाल मृत्‍यु दर बढेर गएको छ । त्यहाँ एड्‍स रोगको प्रकोपको करणले यस्तो भएको हो।
युएस नेपाल अनलाइन: अरु नेपालीहरु तपाईंको जस्तो उच्च ओहोदामा पुग्ने के सम्भाबना छ?
गौतम: नेपालीहरु संसार भरका संघसस्थाहरुमा रामो काम गर्दै आएका छन्‌। त्यस्मा म निक्कै खुशी छु। अहिलेलाई माथिल्लो तहमा नभए पनि जुनियर र मध्यम तहमा धेरै नेपालीहरु छन्‌।
युएस नेपाल अनलाइन: आउने दश बर्षमा कोही तपाईंको स्तरमा पुग्लान्‌ त?
गौतम: मलाई त अबश्य पुग्छन्‌ भन्ने पूर्ण विश्वाश छ। र मभन्दा पनि माथि जानु पर्छ। नेपालीहरुले अबसर पाएमा ति पद सम्हाल्न सक्दछन्‌ । मेरो कामना र विश्वाश यही छ।
युएस नेपाल अनलाइन: तपाईंले भबिश्यको योजना के बनाउनु भएको छ त?
गौतम: अब म नेपाल फर्किदै छु। मेरो मुख्य कर्मस्थल पनि अब नेपाल नै हुनेछ। मैले मेरो जतिसक्दो समय नेपालको बिकासको लागि दिन चाहन्छु। तर म राजनीतिमा लाग्ने र सरकारमा सामेल हुने छैन। त्यो मेरो रुचीको कुरो होइन। म मेरो विश्वको अनुभबलाई लिएर स्थानिय स्तरमा गएर त्यहाँ भईरहेका रचनात्मक कार्यहरुलाई सहयोग र प्रोत्साहन दिने योजना छ। देश बिकास गर्न महिला उत्थानको ठुलो आबश्यक्ता भएकोले महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र बालिकाहरुको शिक्षामा जोड दिनलागि पर्ने छु। तेसै गरी, यो गएको १०, १२ बर्षमा जुन क्षति भयो त्यो घाऊलाई निको पार्न बिकास र पुनर्निर्माणकोलागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन प्रयास गर्ने छु।
युएस नेपाल अनलाइन: राजनीतिमा लाग्दिन भन्नु भयो, तर सर्ब सम्मतिबाट नियुक्ती भयो भने के गर्नु हुन्छ नि?
गौतम: त्यो त अली हचुवाको (hypothetical) कुरो भयो तर त्यस्तो मप्रति विश्वाश र सद्भाब राखेर मेरो सहयोगको प्रस्ताब आयो भने म त्यस प्रस्ताबलाई सोच्ने छु। Certainly, I will entertain the proposal. तर मलाई अझै पनि देसको बिकास गर्न सरकार मै जानु पर्छ भन्ने लाग्‍दैन। सरकार बाहिर बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ।
युएस नेपाल अनलाइन: आगामी संबिधान सभाको चुनावमा तपाईंको कस्तो भूमिका हुने छ?
गौतम: मेरो आफ्नो अनुभब बिकास र पुनर्सम्रचना सम्बन्धी भएकोले यो बिषयमा सल्लाह र सहयोग दिन म तयार छु। मेरो अनुभब र रुची राजनीतिभन्दा आर्थिक र सामाजिक बिकास भएकोले तेसैमा आफ्नो समय लगानी गर्ने छु।
युएस नेपाल अनलाइन: तपाईंको पुनर्सम्रचना र बिकासको योजना पत्र (Reconstruction and Development Plan) प्रति कस्तो प्रतिकृया पाउनु भएको छ?
गौतम: यो पेपर मैले नेपालका सबै दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेर तयार गरिएको नीति र कार्यक्रमपत्र हो। यसमा अझै छलफल होस् भन्ने चाहन्छु।
युएस नेपाल अनलाइन: तराइमा असन्तुष्‍टी बढेर गएको छ। कतिले हतियार नै उठाएका छन्‌। आदिबासी, जनजाति, दलित, महिलाका समस्याहरु चर्को रुपमा उठ्‍न थालेका छन्‌, तपाईं के भन्नु हुन्छ?
गौतम: हाम्रो देशको ईतिहासमा के भएको छ भने जो पक्षपात, जातीय, लैगिक, भेद्भाब थिए तिनीलाई ढाक छोप गरेर राखिएका थिए अहिलेसम्म। यो कुराहरु बाहिर प्रकाशमा आउनु र पिछडिएका, शोषित बर्गहरुले आफ्नो अधिकारहरुको माग गर्न थाल्‍नु सकारात्मक कुरा हो तर यि माग पुरा गर्न हातहतियार बोकेर जानु, हिंसातिर जानु अबान्छनीय हो। तर माग चाँही जायज छन्‌। त्यस्ता बिषयहरुमा छलफल हुनु पर्छ, शान्तीपूर्ण किसिमले समाधानका बाटाहरु पहिल्याउनु पर्छ।
युएस नेपाल अनलाइन: तर नेपालको ईतिहासले त यस्तै देखायो नि त, जस्ले हतियार समाउँछ उसैले अधिकार पाउँछ, माओवादीहरुले हतियार नउठाएका भए न राजतन्त्र जान्थ्यो, न संबिधान सभा आउँथ्यो।
गौतम: त्यो हुन सक्छ। तर म माओवादीहरुको हतियारले सफलता पायो तेसैले हतियार उठाउने कुरो नै सत्य हो भन्ने स्विकार गर्न सक्दिन। शान्तीपूर्ण तवरबाट पनि धेरै कुराहरु पाउन सकिन्छ। नेपालमा राजा हटाउन माओवादीको केही हात थियो तर अरु सबै दलहरु पनि त्यो पक्षमा थिए। अर्को कुरा, राजा कै आफ्नै दुस्कर्महरुले उनले आफ्नो खुट्टामा आँफैले बन्चरोले पनि हानेको हो।
युएस नेपाल अनलाइन: तपाईंका ब्यक्तिगत रुचिका कुराहरु के के छन्‌?
गौतम: म बचपनमा साहित्यमा निक्कै चाख राख्थें। कबिता लेख्थें, पढ्थें। म हाइ स्कुल छँदा खेरी नै नेपाली साहित्यमा लेखिएका उत्कृष्ट रचनाहरु, जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देबकोटाका जम्मै ग्रन्थहरु, भिमनिधी तिवारी, वालकृष्ण सम, लेखनाथ पौडेललगायतका रचनाहरु पढेको थिएँ। यो बिषयमा अझै पनि चाख छ तर म धेरै बर्ष बाहिर मुलुकमा भएको हुनाले नेपाली साहित्यबाट धेरै पर भएको छु। नेपाल फर्केपछि फेरी नेपाली साहित्य, संगीत र कलामा के कति प्रगति भईरहेको छ, त्यस बिषयमा मैले आफुलाई अप-टु-डेट गराउन चाहन्छु।
युएस नेपाल अनलाइन: अध्ययन मात्र गर्नु हुन्छ कि कलम पनि चलाऊनु हुन्छ?
गौतम: पहिले पहिले कलम चलाऊथें अब हेरौं कस्तो हुन्छ। मलाई अहिले ठूलो समस्या के भा'छ भन्दा ४० बर्ष देश बाहिर भएको हुनाले मेरो नेपाली लेखाइ नै बिग्रेर गएको छ। अभ्यास गर्न मौका पाएको छैन। तेसै भएर स्वदेश फर्के पछि मैले देशलाई पुनराबिश्कार गर्नु छ। नेपाल धेरै बदलिइ सकेको छ। नेपालका गाउँ गाउँमा गएर, त्यहाँको बस्तुस्थिती बुझेर अनुभब बटुल्‍नु छ। त्यसपछि मलाई प्रेरणा आयो भने लेखुँला पनि।
युएस नेपाल अनलाइन: ...भने पछि नेपाल यात्रामा निस्किदै हुनुहुन्छ?
गौतम: हो। तेसै गर्ने बिचार छ।
युएस नेपाल अनलाइन: बाल्यकाल गुल्मीको एउटा पिछडिएको गाउँमा बिताउनु भयो, त्यो बेलाका केही अबिश्मरणीय क्षण छन्‌ कि?
गौतम: त्यो बेला त अनकन्‍टार गाउँ नै भन्नु पर्‍यो। त्यहाँ स्कुल, हुलाक, खानेपानी, मोटार बाटो केही पनि थिएन, त्यस्तो ठाउँमा हुर्किएँ म। अहिले म जति सुकै सफल भएर जति ठुलो मान्छे भए पनि त्यो गाउँको, त्यो बचपनमा खेलेका ठाउँहरु, आफुले खेलाएका साना साना खेलौनाहरुको याद आउँछ-मेरो हृदयमा ति कुराहरु अहिलेसम्मै अति प्रिय छन्‌। Those moments continue to be dear to my heart.
एउटा शिक्षा त के भने जब जब ममा नैराश्यता आउँथ्यो, दु:खका क्षण आउँथे त्यो बेलामा मैले सधैं गाउँ सम्झने गर्थें र सोच्थें म कुन ठाउँबाट आएको मान्छे। त्यो गाउँमा अझै पनि मेरा दौंतरीहरु कति दु:ख पाएर जिएका छन्, मरी रहेका छन्‌। म त धेरै भाग्यमानी छु, त्यो गाउँको आशिर्बादले मैले यती सफलता हाँसिल गर्ने सकें। र, अब त्यो गाउँ र अरु विश्वका गाउँहरुको सहयोग गर्न पाइयोस्, तिनीहरुको बिकास हेर्न पाइयोस् भन्ने चाहना मेरो गाउँको याद आउनासाथ हुन्थ्यो। मेरै उदाहरणबाट पनि अनकन्‍टार गाउँका बाल्बालिका यदी अबसर पाएमा विश्वको माथिल्लो तहमा पुगेर काम गर्न सक्छन्‌ भन्ने देखाउँछ।
युएस नेपाल अनलाइन: काठमाडौंबासी बन्दै हुनुहुन्छ कि गाउँ नै गएर बसोबास गर्ने योजना छ?
गौतम: मेरो बसोबास त काठमाडौं मै हुन्छ होला। तर अहिले संसार धेरै बदली सक्यो। अहिले भुमन्डलीकरण (Globalization) भई सक्यो जस्ले गर्दा पहिले जस्तो गाउँमा जान त्यती गाहारो छैन। म काठमाडौं बसे पनि गाउँ ठाउँमा गैरहने छु। गाउँको बस्तुस्थिती बुझेर, गाउँको बिकासमा बिशेष प्राथमिकता दिनेछु। र विश्वसँग सम्पर्कित पनि भई रहने छु। अहिले गाउँको सेवा गर्न गाउँ मै बस्नु पर्छ भन्ने छैन। वास्तवमा, नेपालको सेवा गर्न नेपाल मै बस्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। प्रबासमा बसेर पनि नेपालीहरुले नेपाललाई ठूलो सेवा गर्न सक्छन्‌।
युएस नेपाल अनलाइन: नेपाली भाबी पुस्तालाई के भन्न चाहनु हुन्छ?
गौतम: हाम्रो देश नेपालको भबिश्य धेरै राम्रो छ, हामी भाग्यशाली हौं। हाम्रो एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत, संसारका ठूला र सबैभन्दा छिटो छिटो बिकास भईरहेका मुलुक जो भबिश्यका अर्थतन्त्रका सुपर पावर (Economic super powers of the future) हुन्‌ । त्यस हिसाबले पनि नेपाललाई बिकास गर्न सजिलो हुनेछ। हामीलाई उत्तर र दक्खिनमा एक-एक अर्ब जनताको बजार छ। नेपाली युबाहरु र बिशेष गरी हाम्रा नेताहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने देशको बिकास र भबिश्यकोलागि बालबालिकामा लगानी गरौं (Let's invest in children)। उनिहरुको शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी, बाल अधिकारलाई मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्छ। तेसो गरेमा हाम्रा भाबी पिंढि नेपालकालागि एक सम्पन्‍न साधन स्रोत हुने छन्‌। हामी कहाँ बिजुली, पर्यटनको पनि ठाउँ छ। नेपालले सही बाटो अपनायो भने हामी कहाँ असीमित अबसरहरु (unlimited opportunities) छन्‌।
युएस नेपाल अनलाइन: तपाईं पनि अहिलेसम्म एक प्रबासी कै नाताले प्रबासी नेपालीहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ?
गौतम: हामी बिदेशमा रहेर पनि नेपालको सेवा गर्न सकिन्छ। तपाईंहरु हीनत्व भावना नलिनुहोस्। यहाँ बसेर पनि तपाईंले सक्दो सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ। जुनसुकै काम गरे पनि त्यो काममा उत्कृष्टता हाँसिल गरेर उदाहरण बन्नुहोस्। देशलाई सम्झी रहनुहोस्, माया नमार्नुहोस्, नेपालमा लगानी गर्नुहोस् तर जुन देशमा बस्‍नुभएको छ त्यस देशमा भिज्ने, तेस देशमा पनि प्रभाब पार्न सक्ने बन्‍नुहोस्‌। हामी नेपाली जति बाहिर सफल हुन सछौं उति नेपालको बिकासमा योगदान दिन सकिन्छ।
Kulchandra Gautam. Photo: Ang Kami Sherpa (PhotoHera.com)
युएस नेपाल अनलाइन: अन्तमा, अब आफ्ना जीवनका अन्तिम क्षणहरु कहाँ बिताउने बिचार छ?
गौतम: म बाँकी जीवन नेपालमै बिताउन चाहन्छु, तेसै भएर नेपाल जान लागेको हो। मैले चाहेको भए यतै अमेरिका मै बस्न सक्थें। अरु ठाउँबाट पनि मलाई कामको अफरहरु आइरहेका छन्‌। तर म आफुलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठान्‍दछु किनभने मैले त्यति सानो पिछडिएको गाउँको मान्छे भएर पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा यसरी काम गर्न पाएँ। अब मैले नेपालको रिण तिर्नु छ। किनभने म जति सफल भएँ तेसमा त्यही गाउँ ठाउँको हावापानी खाएर हुर्केको, त्यहिका जनताको माया, ममताले प्रेरणा पाएर म सफल हुन सकेको हुँ र मैले त्यो रिणलाई तिर्नु पर्छ। तेसैले मैले ब्यक्तिगत रुपमा आफुले पढेको स्कुललाई केही सहयोग दिएर पुनर्निर्माण गर्दैछु, गाउँको सामाजिक बिकासमा पनि केही गर्दैछु। यस्तै प्रकारले सिङ्गो देशलाई नै सहयोग गर्न चाहन्छु। र मेरा अन्तिम दिनहरु, क्षणहरु नेपाल मै बितून्‌। नेपाल हरा भरा भएको, प्रगति भएको हेर्न पाऊँ, तेसैमा नै मलाई सबैभन्दा ठूलो सन्तोष हुनेछ।
From R to L: Pradeep Thapa, Kulchandra Gautam, videographer Shambhu Moktan, and photographer Ang Kami Sherpa.
Kulchandra Gautam with his daughter, Dr. Rekha Hamal and USNeplOnline.com Senior Copy Editor Margaret Carne-Thapa. Photo: eEyeCam.com
Kulchandra Gautam at America-Nepal Friendship Society (ANFS )Annual Awards Dinner and discussion on U.S.-Nepal Relations: Expectations and Realities inaPeriod of Transformation New York City, NY, USA. 29th September, 2007. View, read more»
Kulchandra Gautam at his farewell party organized by Nepal Center, New York on January 21, 2008. View, read more»eEyeCam Photos:
Kulchandra Gautam at his farewell party organized by Nepal Center, New York on January 21, 2008. View, read more» Photos: eEyeCam